Somaliland iyo Imaaraadka oo si rasmiya qalinka ugu wada duugay Heshiiskii Saldhiga Milateri-Akhriso
Home WARARKA Somaliland iyo Imaaraadka oo si rasmiya qalinka ugu wada duugay Heshiiskii Saldhiga...
Hargesa-(Berberanews)-Xukuumadda Somaliland iyo Dawladda Imaaraadka Carabta, ayaa kala saxeexday Axaddii Maanta Heshiiska Saldhig Millateri oo Imaaraadka Carabtu ka samaysto Madaarka Berbera, ka dib markii ay Aqlabiyadda Golayaasha Baarlamaanka Somaliland ee Guurtida iyo Wakiilladu 12-ka bishii 2-aad ee sannadkan u ansixiyeen Xukuumaddu inay la geli karto Imaaraadka.
Wasiirka arrimaha dibedda Dr. Sacad Cali Shire oo Xubin ka ahaa Wefti uu hoggaaminayo Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan-Saylici oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada Dubai ee dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta oo ay arrinta Heshiiska Saldhigga iyo Heshiiskii Dekedda Shirkadda DP World ee Dubai laga leeyahay loogu wareejiyey Dekedda Berbera, ayaa Dhinaca Somaliland u saxeexay Heshiiskaas, waxaanu TV-ga Qaranka ee Xukuumaddu maamusho u akhriyey qaar ka mid ah qodobbada Heshiiskaasi ka kooban yahay.
Waxa uu Wasiir Sacad Cali Shire oo qodobbadaas qaarkood akhriyayey waxa uu yidhi; “Maanta oo Axad ah 19 bisha 3-aad ee 2017-ka, waxaa Heshiis ku kala saxeexday magaalada Abu Dabai dawladda Isu-tagga Imaaraadka Carabta iyo dawladda Jamhuuriyadda Somaliland. Heshiiskaas oo koobaya, iskaashi dhinacyada Amniga, Dhaqaalaha, Siyaasadda iyo Arrimaha dibedda ah, kaas oo ku salaysan go’aankii Baarlamanka Jamhuuriyadda Somaliland ka soo baxay 12-kii bishii febraayo 2017-ka. Heshiisku waxa ka kooban yahay qodobbadan:-
Dawladda Somaliland oo oggolaansho siisay in Ciidammada dawladda Imaaraadka Carabtu isticmaalaan Madaarka Diyaaradaha ee Berbera.
Dawladda Imaaraadka Carabta oo ka dhisi doonta magaalada Berbera Madaar cusub oo ay isticmaali doonaan Diyaaradaha Rakaabka iyo kuwa Xamuulka. Taas oo macneheedu yahay inay Berbera yeelan doonto laba Madaar. Jidka isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Tog-Wajaale oo dhererkiisu yahay 250-KM, ayaa isna ka mid ah Mashaariicda la fulin doono. Mashaariic kale oo la fulin doonaa iyaguna waxay la xidhiidhaan; Biyaha, Tamarta, Caafimaadka iyo Waxbarashada. Mashaariicdaas waxaa la fulin doonaa saddexda Sannadood ee soo socda.
Dawladda isu-tagga Imaaraadka Carabta oo Suuqyadeeda Shaqo u furi doonta Muwaaddiniinta Reer Somaliland.
Dawladda Isu-tagga Imaaraadka Carabta oo taageeri doonta Shirkadaha Maalgashiga ee Imaaraadku inay maalgashadaan Somaliland.
Dawladda Isu-tagga Imaaraadka Carabta iyo Dawladda Somaliland oo iska kaashan doona dhinaca Ammaanka.
Wuxuu heshiiskani albaabbo cusub u furi doonaa Somaliland iyo Beesha Caalamka.
Ugu dambayn waxa kale oo labada Dhinac isla garteen in dawladda Imaaraadka Carabtu Gargaar deg-deg ah gaadhsiiso Dadka ku tabaaloobay Abaaraha.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland.
Sidoo kale, Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici) oo Weftigan hoggaaminayey, Heshiiskana goob-joog ka ahaa, ayaa isaguna ka hadlay Heshiiskaas oo uu sheegay inuu yahay mid faa’iido u yeelanaya Somaliland.
Sidoo kale, Hadalka Wasiirka arrimaha dibedda iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan-Saylici jeediyeen saxeexa heshiiskaas ka dib ee ay ku faahfaahiyeen faa’iidooyinka ay sheegeen inay Somaliland ugu jiraan, waxaannu idiinku soo gudbinaynaa Muuqaalkan Hoose ee daawasho wacan oo wanaagsan:-
Heshiiskaas Millateri ee dhex-maray Somaliland iyo Imaaraadka Carabta, waxaa qodobbadiisa ku jira, sida lagu baahiyey caawa TV-ga Qaranka ee Xukuumaddu Maamusho inuu ku jiro qodob dhigaya in Somaliland iyo Imaaraadku iska kaashan doonaan in la difaaco Xuduudaha Somaliland ee dhinacyada Dhulka, Badda iyo Cirka haddii ay ku yimaaddaan weerarro Gardarro ahi Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaanu noqonayaa heshiiskii labaad ee dhex-maray Somaliland iyo Imaaraadka Carabta, iyada oo hore Xukuumadda Somaliland heshiis 40 sano soconaya ula gashay Shirkadda Imaaraadka ah ee DP World oo lagu wareejiyey kawdii bishan Maarso Maamulka Dekedda Berbera oo ay gacanta ku hayn doonto muddo 40 sano ah. Halka Heshiiska Saldhigga la sheegay inuu yahay muddo 25 sano ah sida ay Xukuumaddu hore u sheegtay, balse la sheegay inuu socon doono muddo 35 sano ah.
Hase-yeeshee, Siyaasiyiin Madax-bannaan iyo Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani, ayaa hore uga digay hirgelinta heshiiskaas Saldhigga Millateri oo ay ku tilmaameen mid halis badan ku leh Somaliland iyo waddamada la deriska ah, isla markaana waxay ku doodeen inaanu Heshiiskaas Saldhiggu ahayn mid cad ee uu yahay mid madmadaw badani ku xeeran yahay, sidaas awgeedna loo baahan yahay inay Xukuumaddu caddayso faa’iidooyinka rasmiga ah ee Somaliland ugu jira iyo dammaanadda inaanay dhibaato kaga iman karin Saldhiggaas Millateri Dadka iyo Dalka Somaliland iyo Dalalka la deriska ah-ba.
Geesta kale, Dawladda Federaalka Soomaaliya, ayaa cambaaraysay heshiiskaas Saldhigga Millateri oo ka soo horjeesatay, isla markaana sheegtay inuu yahay wax aan la aqbali karin oo saamayn taban ku leh dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya. Hanti-dhawraha guud ee Qaranka Soomaaliya oo bishii hore Saxaafadda kula hadlay Muqdisho, ayaa sheegay in aan heshiis loogu yeedhi karin, ee uu yahay wax ay Dillaaliin uu ugu yeedhay inay Xukuumadda Somaliland iyo Xukuumaddii hore ee Soomaaliya ee Raysal-wasaare Cumar Cabdirashiid qayb ka ahaayeen isfahamkiisa oo ay Imaaraadka ka dillaaleen, dawladda Soomaaliyana ay ugu baaqayso Imaaraadku inuu arrintaa faraha kala baxo. Waxaanay taasi sababtay in khilaaf siyaasadeed ka dhex-qarxo Soomaaliya iyo Imaaraadka oo la sheegay inay maalmahan Diblamaasiyiin Maraykanka iyo Masar ka tirsani dhex-dhexaadintooda ku jireen.
Previous articleMadaxweynaha Djibouti oo diyaarad ka uu duuliye ka noqday ka dejiyay Addis Ababa-Daawo
Next articleMaayarka Degmada Seyla oo ku dhaawacmay shil baabuur